တိုင်းလူဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
Mainly: တရုတ်. Others: မြန်မာ, လာအို, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်
တိုင်ထံအက္ခရာ, ထိုင်းအက္ခရာ, လူးရှမ်းစာသစ်
လူးရှမ်း ( ဗမာ : လူးရှမ်း; luu Shan, လူးရှမ်း : ᦅᧄᦺᦑᦟᦹᧉ ᦅᧄᦺᦑᦟᦹᧉ ,ဂမ်ဒိုင်လူး၊ တိုင်ထံ စာလုံးပေါင်း - တမ်းပလိတ်:Script/Tai Tham ) သို့မဟုတ် တိုင်လူး၊ တိုင်လီူး၊ တိုင်လူး၊ တိုင်လီ၊ သိပ်သောင်ဗန်န_ဆစ်ဆောင်ပန်န ဒိုင် ( တရုတ် : ဒိုင်းလေယူ၊ ထိုင်း: ภาษาไทลื้อ အသံထွက် [pʰāː.sǎː.tʰāj.lɯ́ː] ဘာသာထိုင်း လူး အသံထွက် [pʰāː.sǎː.tʰāj.lɯ́ː] ; ဗီယက်နမ်: Lự သို့ Lữ ) စကားသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် လူဦးရေ ၇၀၀,၀၀၀ ခန့် ပြောဆိုကြပြီ လူးရှမ်း ဘာသာစကားသည် တိုင်အနွယ်ဝင်ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ ၎င်းဘာသာစကားပြောဆိုသူများ စုစုပေါင်းအရေအတွက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ( ယူနန် )တွင် လူဦးရေ ၂၈၀,၀၀၀၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀,၀၀၀၊ လာအိုတွင် ၁၃၄,၀၀၀၊ ထိုင်းတွင် ၈၃,၀၀၀ နှင့် ဗီယက်နမ်တွင် ၄,၉၆၀ ဦးတို့၏ စာရင်းပါပါဝင်သည်။  ဘာသာစကားသည်အခြား တိုင် ဘာသာစကားများ နှင့်ဆင်တူသည်။ ထိုင်းမြောက်ပိုင်းဘာသာစကား ဟုလည်းခေါ်သည့်ခမ်းမောင် သို့မဟုတ် တိုင်ယွန်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် သိပ်သောင်ဗန်နဒိုင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ၊ Pu'er City ရှိ Jiangcheng Hani နှင့် ယီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု များတွင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်မှာတော့, လူးရှမ်းဘာသာကို တရားဝင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် လူး ရှမ်းမျိုးနွယ်ကို သူတို့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု ဒိုင်လူမျိုး တိုင်ဘာသာစကားများ များစွာရှိသည်။ ဇောင်
ယေဘုယျအားဖြင့် ပွင့်လင်းသော အသံထွက် တွင်သရ အက္ခရာများ (အပြီးသတ်မပါဘဲ) သည်ရှည်လျားပြီး၊ ပိတ်ထားသော အသံထွက် တွင် ( /aː/ and /uː/ ) မှလွဲ၍ တိုသည်။
၁.၁ မစစ်ဆေးရသေးသော အသံထွက် များတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်တန်ချိန်များ
မစစ်ဆေးရသေးသော အသံထွက် များတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်တန်ချိန်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
လက်ဆောင်အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ syllables ခြောက် phonemic တန်ချိန်အတွက်အဆုံးသတ်ဆိုလိုသည်မှာတံခါးပိတ် syllables အောက်ဖော်ပြပါဇယား sonorant အသံ ထိုကဲ့သို့သော [m], [n], [ŋ], [w] နှင့် [j] နှင့်ပွင့်လင်း syllables [m], [n], [ŋ], [w] ။ check လုပ်ထားသော syllables (-p, -t or -k နှင့်အဆုံးသတ်သူများ) တွင်သုံးခုသာခွင့်ပြုထားသော်လည်း unchecked syllables များအတွက်တန်ချိန်ခြောက်လုံးရှိသည်။
Tai Lue script အသစ်
မြင့်သည် 55 á /káː/ ᦂᦱ ကျီးကန်း
မြင့်တက် ၃၅ a᷄ /ka᷄ː/ ᦂᦱᧈ သွားရန်
နိမ့်မြင့်တက် ၁၃ a᷅ /ka᷅ː/ ᦂᦱᧉ ဆန်အညွန့်
လဲကျ ၅၁ â /kâː/ ᦅᦱ ဖမ်းခံရဖို့
နှစ်လယ် ၃၃ က /kaː/ ᦅᦱᧈ ဈေးနှုန်း
အနိမ့် ၁၁ à /kàː/ ᦅᦱᧉ စီးပွားရေးလုပ်ရန်
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည်စစ်ဆေးထားသော syllables တွင်အသံထွက်အသံထွက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ glottal stop [ʔ] နှင့် [p], [t] နှင့် [k] တို့ဖြစ်သော ကြမ်းတမ်းသောအသံများ ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသောပိတ်ထားသော syllables ။
မြင့်မားသော ᦜᧅ /la᷄k/ ပို့စ်
နှစ်လယ် ᦟᧅ /lāk/ ခိုး
မြင့်မားသော ᦜᦱᧅ /la᷄ːk/ အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်
နှစ်လယ် ᦟᦱᧅ /lāːk/ draɡဆွဲ
ထိုင်းနှင့် လာအိုနည်းတူ လူးရှမ်းစကား၌ သင်္သကရိုက် နှင့် ပါဠိ စကားလုံးများကို မွေးစားအသုံးပြုထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူးရှမ်းစကားသည် အနောက်တောင်ပိုင်းတိုင်မျိုးနွယ်များအနက်မှ ရှမ်း၊ တိုင်နူးအာ့တို့နှင့် ဝေါဟာရများစွာ တူညီပါသည်။ လူးရှမ်းစကားသည် (ဝေါဟာရတူသည်။ ) မြောက်ပိုင်းထိုင်း (လန်နယွန်းရှမ်း)နှင့် ၉၅%၊ ဗဟိုထိုင်းနှင့် ၈၆%,၊ ရှမ်းနှင့် ၉၃%၊ ဂုံရှမ်းနှင့် ၉၅% အသီးသီးတူညီပါသည်။
ยี่สิบ→ᦌᦱᧁ ( /jîː sìp/ → /sâːw/, နှစ်ဆယ်; cf. လာအို: / sáːw /, ထိုင်းထိုင်း: / sāw /)
พูด→ᦀᦴᧉ ( /pʰûːt/ → /ʔu᷅ː/, စကားပြောရန်; cf. Thai Thai: / ʔu᷇ː /)
ชายพี่→ᦀᦻᧉ ( /pʰîː t͡ɕʰaːj/ → /ʔa᷅ːj/, အစ်ကို၊ cf. လာအို: / ʔâːj /, Thai:: / ʔa᷇ːj /)
หนึ่ง→ᦓᦹᧂᧈ ( /nɯŋ/ ၊ တစ်ခု )
หก→ᦷᦠᧅ ( /hók/ ၊ ၆ နှစ်)
เจ็ด→ᦵᦈᧆ ( /t͡ɕét/, ခုနစ်)
สิบ→ᦉᦲᧇ ( /síp/, ten)
กิน→ᦂᦲᧃ ( /kín/ စားသောက်ရန် /kín/ )
အချို့စကားလုံးများသည်အသံတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောအသံတစ်ခုနှင့်ကွဲပြားသည်။ များစွာသောအားဖြင့်ထိုင်းဘာသာတွင်ကန ဦး /r/ ( /r/ ) သည်) ( /h/ ) ဖြစ်သည်။ လာအိုနှင့်ယွန်းရှမ်းတို့ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
ร้อน→ᦣᦸᧃᧉ ( /rɔ́n/ → /hɔ̀n/ ၊ အပူ; cf. လာအို: / hɔ̂n /, Thai:: / hɔ́ːn /)
รัก→ᦣᧅᧈ ( /rák/ → /hak/ to love) cf. လာအို: / hāk /, Thai:: / ha᷇k /)
รู้→ᦣᦴᧉ ( /rúː/ → /hùː/ ; သိရန်; cf. လာအို: / hûː /, Thai:: / húː /)
Aspire ဗျည်း (อักษรต่ำ /ʔàk sɔ̌n tàm/ unaspirated ဖြစ်လာနိမ့်လူတန်းစားဗညျြးအုပျစုထဲမှာ:
ประเทศ→ᦘᦰᧈᦑᦵᧆ ( /praʔtʰêːt/ → /pʰaʔtêːt/, နိုင်ငံ; cf. ထိုင်းမြောက်ပိုင်း/pʰa.têːt/)
ให้→ᦣᦹ ( /hâj/ → /hɯ᷅/, ပေးရန်)
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၀၀ 10,000 100,000 1,000,000
↑ လူးရှမ်း at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Lu"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Lü. Ethnologue။
DāoShìxūn世勋 刀世勋 : Dǎi-Hàncídiǎn 傣汉词典 ( Dai-Chinese Dictionary ; Kunming, Yúnnánmínzúchūbǎnshè云南 云南民族出版社 2002) ။ ဤသည်မှာ Tai Lue အဘိဓာန်ဖြစ်သည်။
Yu Cuirong ( 喻翠荣 ), လူး Meizhen ( 罗美珍 ): Daile-Han cidian 傣仂汉词典 ( Tai Lue - Chinese Dictionary ; Beijing, Minzu chubanshe 2004) ။
Hanna, William J: Dai Lue- အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် ၊ ချင်းမိုင် - ပိုးထည်စာအုပ်များ။ ၂၀၁၂ ။ ISBN 978-6162150319 ISBN 978-6162150319
SeaSite: Tai Lue, ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်
Omniglot - လူးရှမ်းအရေးအသား
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တိုင်းလူဘာသာစကား&oldid=695548" မှ ရယူရန်